လုပျငနျးခှငျတှငျ ကွုံတှရေ့သော ဝနျထမျးအမြိုးအစားမြား
မတူညီသောနရောအသီးသီးတှငျ အလုပျလုပျကိုငျနသေော လူမြားသညျ တှကွေုံ့ဖွတျသနျးခဲ့သော အခွအေနမြေားအပျေါ မူတညျ၍ တဈဦးခငျြးစီ၏ ကိုယျရညျကိုယျသှေးမြားမှာလညျး ကှဲပွားခွားနားသှားလရှေိ့သညျမှာ အထငျအရှားပငျ ဖွဈသညျ။ အခြို့လူမြားသညျ အလှယျတကူ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရနျ အဆငျပွသေျောလညျး အခြို့မှာ အဆငျပွအေောငျ လိုကျလြောညီထှစှော နထေိုငျရနျပငျ မကှယျကူလှပေ။ လုပျငနျးခှငျသညျ ဝနျထမျးမြားအဖို့ Second Home ဟုပငျ တငျစားချေါဝျေါရသညျအထိ ကြှနျတျောတို့၏ အခြိနျအမြားစုအား လုပျငနျးခှငျတှငျသာ ကုနျဆုံးရသညျသာဖွဈသညျ။ မိသားစုဝငျမြားနှငျ့အတူ ကုနျဆုံးရခြိနျထကျ ဝနျထမျးအခငျြးခငျြး ပေါငျးသငျးဆကျဆံရခြိနျက ပိုမြားသညျမဟုတျပါလား။
ဝနျထမျးမြားရဲ့ မတူညီသောကိုယျရညျကိုယျသှေးမှ ကြှနျတျောတို့ မညျသညျ့အရာမြားကို စဈထုတျရရှိနိုငျမလဲ ???
ထိုအမြိုးအစား ဝနျထမျးမြားသညျ ယဘေုယအြားဖွငျ့ နောကျလိုကျနောကျပါကောငျးမြား ဖွဈကွသညျ။ ရုံးကိစ်စမြား၊ အဖှဲ့လိုကျ လုပျဆောငျရသော ကိစ်စရပျမြားတှငျ သူတို့သညျ အားတကျသရော ထောကျပံ့ပါဝငျ အားပေးကူညီကွလရှေိ့သညျ။ ဝနျထမျးအခငျြးခငျြး လိုအပျသော အကူအညီမြားအား တတျအားသရှေ့ ပါဝငျပေးစှမျးနိုငျရနျ အစဉျ ကွိုးပမျးနကွေသူမြားဖွဈသညျ။
ထိုအမြိုးအစားဝနျထမျးမြားသညျ မြားသောအားဖွငျ့ လုပျငနျးခှငျအတှငျး ၎င်းငျးတို့ရငျဆိုငျဖွရှေငျးရမညျ့ အခကျအခဲပွသနာမြားအား ပြျောပြျောကွီး ကိုငျတှယျဖွရှေငျးခငျြကွသူမြား ဖွဈကွသညျ။ အဆိုပါဝနျထမျးမြားသညျ ဉာဏျကောငျးကွသူမြားဖွဈကွပွီး ဖိအားမြားနှငျ့ စိနျချေါမှုမြားသညျ သူတို့၏ စှမျးရညျနှငျ့ လုပျကိုငျနိုငျစှမျးအား ပိုမိုကောငျးမှနျလာစသေညျဟု ယုံကွညျစိတျရှိကွသူမြားဖွဈသညျ။ ထိုဝနျထမျး၏ ကွိုးစားအားထုတျမှုမြားသညျ ရာနှုနျးပွညျ့ ကောငျးမှနျသော ရလဒျမြားကိုသာ ယူဆောငျလာလရှေိ့သညျ။
နှဈပေါငျးမြားစှာ ရရှိလာသော အတှအေ့ကွုံမြားအပျေါအခွခေံပွီး ခေါငျးဆောငျနရောကို ရရှိလာသောဝနျထမျးမြား ဖွဈကွသညျ။ လကျအောကျငယျသား ဝနျထမျးမြားအား မညျသို့ဦးဆောငျ၍ ချေါဆောငျသှားရမညျကို ကောငျးစှာသိရှိနားလညျသူမြား ဖွဈကွသညျ။ သူတို့အဖှဲ့ထဲမှ ဝနျထမျးတဈသီးခငျြးစီ၏ လုပျရညျကိုငျရညျနှငျ့ လုပျနိုငျစှမျးတို့ကို ကောငျးစှာ သဘောပေါကျ နားလညျသူတို့ ဖွဈကွသညျ။ လုပျငနျးသဈတဈခုအား စတငျခွငျးနှငျ့ ထိုလုပျငနျးအသဈတှငျ ဝနျထမျးမြား ပြျောရှငျစှာ ပါဝငျလာအောငျ သိမျးသှငျးနိုငျသူမြား ဖွဈကွသညျ။ ယုံကွညျမှုပွငျးထနျသူမြားဖွဈကွပွီး တာဝနျနှငျ့ဝတ်တရားအား ကောငျးစှာ သဘောပေါကျ နားလညျသူမြားဖွဈကွသညျ။
ထိုအမြိုးအစားဝနျထမျးမြာသညျ ကိစ်စတဈခုအပျေါတှငျ ကွညျ့သော ရှု့မွငျတတျသောနရောတှငျ အကောငျးဘကျမှနေ၍စဉျးစားခွငျးထကျ အဆိုးဘကျမှနေ၍စဉျးစားခွငျးကိုသာ အားသာတတျသော လူမြိုးမြားဖွဈကွသညျ။ ထိုသူမြားသညျ မိမိကိုယျတိုငျ ကောငျးမှနျသောကိစ်စရပျမြားကို မဖနျတီးနိုငျကွသျောငွား အခွားသူမြား ကောငျးစှာပွုလုပျထားသော ကိစ်စမြား၏ အသေးငယျဆုံးသော လှဲခြျောမှုမြား မွငျနိုငျစှမျး ရှိကွသူမြားဖွဈကွသညျ။
ထိုအမြိုးအစား ဝနျထမျးမြာသညျ သူတို့၏ ကိုယျပိုငျထငျမွငျူဆခကျြမြားကို ထုတျဖျောပွောကွားဆှေးနှေးခွငျးထကျ ရှမှေ့ပွသှားသော အစီအစဉျမြားနောကျကိုလိုကို့ရနျ အားသာသူမြား ဖွဈကွသညျ။ သူတို့ကိုယျပိုငျ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ နှဈသကျခွငျးရှိသညျဖွဈစေ၊ မရှိသညျဖွဈစေ ရှမှေ့ဦးဆောငျသူ၏ ပွောသမြှအား ခငေါးညိတျခွငျးဖွငျ့သျောလညျးကောငျး၊ ပွောသမြှအား ထောကျခံခွငျးဖွငျ့သျောလညျးကောငျး နောကျကလိုကျလ့ရှိကွသူမြား ဖွဈကွသညျ။ ထိုသူမြားသညျ လုပျငနျးခှငျအတှငျး အဆငျအပွဆေုံး ပေါငျးသငျးနထိုငျနိုငျသူမြားဖွဈကွသညျ။
ထိုအမြိုးအစားဝနျထမျးမြားတှငျ ကိစ်စအတျောမြားမြားနှငျ့ပတျသကျ၍ ပွောစရာမြားနှငျ့ အကွံဉာဏျမြား အမွောကျအမြားရှိနတေတျသညျ။ ထိုဝနျထမျးမြား၏ အရပျမနား စကားပွောဆိုခွငျးသညျ အလုပျခြိနျအတှငျး စိတျအနှောကျအယှကျမြား ရရှိနိုငျသျောလညျး လုပျငနျးခှငျအတှငျးရှိ အခွားဝနျထမျးမြား၏ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ကောငျးခွငျး၊ ဆိုးခွငျးမြားအားလုံးနှငျ့ ပါဝငျပတျသတျနသေောကွောငျ့ ထိုသူမြားမြား “Social Butterflies” မြားဟုပငျ တငျစားချေါဝျေါရမညျဖွဈသညျ။။
မညျသို့ပငျဖွဈစေ ကြှနျတျောတို့သညျ လုပျငနျးခှငျအတှငျးရှိ လုပျဖျောကိုငျဖကျမြားနှငျ့ ကူးလူးဆကျဆံနရေမညျမှာ ရှောငျလှဲ၍မရသောကိစ်စဖွဈပွီး နားလညျမှုရှိရှိဖွငျ့ ပြျောရှငျဖှယျကောငျးသော လုပျငနျးအား ဖနျတီးရမညျမှာလညျး အရေးပါသော အခကျြတဈခကျြပငျဖွဈသညျ။
လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကြုံတွေ့ရသော ၀န်ထမ်းအမျိုးအစားများ
မတူညီသောနေရာအသီးသီးတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော လူများသည် တွေ့ကြုံဖြတ်သန်းခဲ့သော အခြေအနေများအပေါ် မူတည်၍ တစ်ဦးချင်းစီ၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများမှာလည်း ကွဲပြားခြားနားသွားလေ့ရှိသည်မှာ အထင်အရှားပင် ဖြစ်သည်။ အချို့လူများသည် အလွယ်တကူ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရန် အဆင်ပြေသော်လည်း အချို့မှာ အဆင်ပြေအောင် လိုက်လျောညီထွေစွာ နေထိုင်ရန်ပင် မကွယ်ကူလှပေ။ လုပ်ငန်းခွင်သည် ၀န်ထမ်းများအဖို့ Second Home ဟုပင် တင်စားခေါ်ဝေါ်ရသည်အထိ ကျွန်တော်တို့၏ အချိန်အများစုအား လုပ်ငန်းခွင်တွင်သာ ကုန်ဆုံးရသည်သာဖြစ်သည်။ မိသားစုဝင်များနှင့်အတူ ကုန်ဆုံးရချိန်ထက် ၀န်ထမ်းအချင်းချင်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရချိန်က ပိုများသည်မဟုတ်ပါလား။
၀န်ထမ်းများရဲ့ မတူညီသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမှ ကျွန်တော်တို့ မည်သည့်အရာများကို စစ်ထုတ်ရရှိနိုင်မလဲ ???
ထိုအမျိုးအစား ၀န်ထမ်းများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် နောက်လိုက်နောက်ပါကောင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ရုံးကိစ္စများ၊ အဖွဲ့လိုက် လုပ်ဆောင်ရသော ကိစ္စရပ်များတွင် သူတို့သည် အားတက်သရော ထောက်ပံ့ပါဝင် အားပေးကူညီကြလေ့ရှိသည်။ ၀န်ထမ်းအချင်းချင်း လိုအပ်သော အကူအညီများအား တတ်အားသရွေ့ ပါဝင်ပေးစွမ်းနိုင်ရန် အစဉ် ကြိုးပမ်းနေကြသူများဖြစ်သည်။
ထိုအမျိုးအစားဝန်ထမ်းများသည် များသောအားဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ၄င်းတို့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမည့် အခက်အခဲပြသနာများအား ပျော်ပျော်ကြီး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းချင်ကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါဝန်ထမ်းများသည် ဥာဏ်ကောင်းကြသူများဖြစ်ကြပြီး ဖိအားများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများသည် သူတို့၏ စွမ်းရည်နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းအား ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေသည်ဟု ယုံကြည်စိတ်ရှိကြသူများဖြစ်သည်။ ထိုဝန်ထမ်း၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုများသည် ရာနှုန်းပြည့် ကောင်းမွန်သော ရလဒ်များကိုသာ ယူဆောင်လာလေ့ရှိသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ ရရှိလာသော အတွေ့အကြုံများအပေါ်အခြေခံပြီး ခေါင်းဆောင်နေရာကို ရရှိလာသောဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ကြသည်။ လက်အောက်ငယ်သား ၀န်ထမ်းများအား မည်သို့ဦးဆောင်၍ ခေါ်ဆောင်သွားရမည်ကို ကောင်းစွာသိရှိနားလည်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့အဖွဲ့ထဲမှ ၀န်ထမ်းတစ်သီးချင်းစီ၏ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်နှင့် လုပ်နိုင်စွမ်းတို့ကို ကောင်းစွာ သဘောပေါက် နားလည်သူတို့ ဖြစ်ကြသည်။ လုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုအား စတင်ခြင်းနှင့် ထိုလုပ်ငန်းအသစ်တွင် ၀န်ထမ်းများ ပျော်ရွှင်စွာ ပါဝင်လာအောင် သိမ်းသွင်းနိုင်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ယုံကြည်မှုပြင်းထန်သူများဖြစ်ကြပြီး တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားအား ကောင်းစွာ သဘောပေါက် နားလည်သူများဖြစ်ကြသည်။
ထိုအမျိုးအစားဝန်ထမ်းမျာသည် ကိစ္စတစ်ခုအပေါ်တွင် ကြည့်သော ရှု့မြင်တတ်သောနေရာတွင် အကောင်းဘက်မှနေ၍စဉ်းစားခြင်းထက် အဆိုးဘက်မှနေ၍စဉ်းစားခြင်းကိုသာ အားသာတတ်သော လူမျိုးများဖြစ်ကြသည်။ ထိုသူများသည် မိမိကိုယ်တိုင် ကောင်းမွန်သောကိစ္စရပ်များကို မဖန်တီးနိုင်ကြသော်ငြား အခြားသူများ ကောင်းစွာပြုလုပ်ထားသော ကိစ္စများ၏ အသေးငယ်ဆုံးသော လွဲချော်မှုများ မြင်နိုင်စွမ်း ရှိကြသူများဖြစ်ကြသည်။
ထိုအမျိုးအစား ၀န်ထမ်းမျာသည် သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ူဆချက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားဆွေးနွေးခြင်းထက် ရှေ့မှပြသွားသော အစီအစဉ်များနောက်ကိုလိုက်ို့ရန် အားသာသူများ ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကိုယ်ပိုင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်သက်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ရှေ့မှဦးဆောင်သူ၏ ပြောသမျှအား ခေငါးညိတ်ခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပြောသမျှအား ထောက်ခံခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း နောက်ကလိုက်လ့ရှိကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသူများသည် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အဆင်အပြေဆုံး ပေါင်းသင်းနထိုင်နိုင်သူများဖြစ်ကြသည်။
ထိုအမျိုးအစားဝန်ထမ်းများတွင် ကိစ္စအတော်များများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောစရာများနှင့် အကြံဥာဏ်များ အမြောက်အများရှိနေတတ်သည်။ ထိုဝန်ထမ်းများ၏ အရပ်မနား စကားပြောဆိုခြင်းသည် အလုပ်ချိန်အတွင်း စိတ်အနှောက်အယှက်များ ရရှိနိုင်သော်လည်း လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ အခြားဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းခြင်း၊ ဆိုးခြင်းများအားလုံးနှင့် ပါဝင်ပတ်သတ်နေသောကြောင့် ထိုသူများများ “Social Butterflies” များဟုပင် တင်စားခေါ်ဝေါ်ရမည်ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကျွန်တော်တို့သည် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ကူးလူးဆက်ဆံနေရမည်မှာ ရှောင်လွဲ၍မရသောကိစ္စဖြစ်ပြီး နားလည်မှုရှိရှိဖြင့် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော လုပ်ငန်းအား ဖန်တီးရမည်မှာလည်း အရေးပါသော အချက်တစ်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။